Ormus, alchemical monoatomic ọlaedo maka iteta na njikọta ụwa ndị ọzọ - AFRIKHEPRI
Ormus, the alchemical monoatomic gold maka iteta na ichikota uwa ndi ozo
Eziokwu nke eziokwu - Akwụkwọ edemede (2016)
sunday, Julaị 5, 2020
Welcome AJỤMỤ NA ỤBỤRỤ
45 min gụọ
A na - akọwakarị elms dị ka “ihe ndị pụrụ iche”. Ndụ ha, ọ bụ ezie na obodo sayensị anaghị akwado ya, ọ ga-agba akaebe na ọnọdụ nke anọ nke ịkọwa abughi ihe siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri. A kpọrọ steeti a “M-steeti”.
A na-enweta ọla edo site na ígwè. Ha abụghị ihe na-erughị ihe osise nke Mendeleev n'ụdị kachasị mma.
N'ime afọ 1970, a na-akwado nkwado nke ORMUS na mmalite ya David Hudson, bụ onye ọrụ ugbo America nke bara ọgaranya. Kemgbe ọ nwụrụ, nchọpụta n'ọhịa ejiriwo ike na-arụ ọrụ, na mmelite na nchoputa nke sitere na ule, ule, na mgbalị ndị niile na-eme nchọpụta n'ụwa dum. Otutu ndi mmadu na-ekwurita uka na ulo akwukwo ndi ozo nye Ormus na-emekọ ihe n'eziokwu maka mmasi nke ihe oma ndia. Ha nọ na mpaghara 5.
Ormes pụtara n'ụzọ nkịtị "Orbitally weghachite Monoatomic Elements". Okwu ahụ bụ "Ormuz"Ma ọ bụ ya, bụ aha njirimara e ji mee ihe maka nkwadebe ọ bụla nwere ihe ndị a. A na-eme ụfọdụ ihe edozi Ormus site na ọlaedo, n'ihi ya, ị ga-enweta ọlaedo na M-ala. A na-edozi ndị ọzọ site na ọla kọpa, n'ihi ya, a na-enweta ọla kọpa na M-ala.
Ụzọ ọzọ nke mmịpụta, nke na-anọgide na-eme, bụ ihe a na-akpọ usoro "mmiri", Ebe ORMUS kwadebere site na nnu nnu ebe ọ bụ na o nwere ihe dị iche iche nke mineral. Ihe a na-eme site n'ịkwado ngwa ngwa a bụ "transmutation"Ndị na-emepụta nnu na nnu na ụdị ha dị na steeti-M.
Ebe ọ bụ na ORMES na-enye echiche ọhụrụ banyere usoro ahụ ike, ọrụ ugbo ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, na-enye ụdị ọrụ pụrụ iche nke dị na ya n'oge, ihe ndị a - ọ bụrụ na a ghọtara - a ga-ewere ya dịka ihe kacha mkpa, ma ikekwe nchọpụta kachasị akpali mmasị na nzụlite nke sayensị na ahụike.
Tupu ịbanye n'obi nke ORMUS isiokwu na itinye faịlụ nke faịlụ nke ọma site na saịtị anyị, anyị na-ekweta ngwa ngwa na ịdị adị nke ihe yiri ka ọ bụ ihe na-erughị ala dị elu nwere ike iyi ka ihere karịa otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ anyị. Karịsịa ebe ọ bụ na nchọpụta ya, ihe karịrị 30 afọ gara aga, esonyere ya site na nkwụsị na-eju anya.
Ya mere, anyị na-ajụ ajụjụ. Ànyị dị njikere? Ma, anyi enwere onwe anyi ime ihe a? Site n'inwe ego na nke azụmahịa, ma ọ bụ nanị nnwere onwe na nnwere onwe anyị ịhọrọ, kpebie, wepụtụ onwe gị mgbe ọ dị mkpa. Ihe ndị a bụ ajụjụ ndị anyị chere na anyị kwesịrị iche echiche.
N'ịlaghachi na ngwọta anyị, ọ ga-abụ ebe a iji kwupụta otu usoro nke otu n'ime ndị enyi anyị, onye nchọpụta na isiokwu Ormus maka afọ 10, nwere mmasị iji; "Ọ bụghị oge gị ịbịa Ormes, ọ bụ Ormes nke ga-abịakwute gị!"
Ihe na-ezochi mmetọ a nke asụsụ ogbi na ọ dịkarịa ala ọchịchịrị. Ikekwe ị ga-achọpụta ya. Ndị maarala ọrụ nke njedebe Wilhelm Reich na "orgone"Ihe ga-eso ya agaghị eju gị anya. N'ezie, nnukwu ọrụ nke ahụmahụ dị ka ọbịbịa nke ọha mmadụ. Ọ bụ naanị ya ga-agafe usoro a, na otu ihe siri ike ọ ga-abụ n'ọnọdụ ugbu a iji mee mgbanwe dị otú ahụ.
Ormes na-enye anyị ọrụ ha, maka uru nke onwe anyị, nke anyị na ndị mmadụ, nke ụmụ mmadụ anyị, kamakwa anụmanụ, osisi. A naghị atụle ha, ha na-anwale, ndị eziokwu na-akwado ha, mgbe ụfọdụ ka ha na-adaba dị ka ọzụzụ dị ka ihe mkpasu iwe, ma a ghọtara ma kwanyere ha ùgwù dị ka taa bụ usoro ihe omimi.
Ojiji na ihe omuma nke ORMES na-abia na nkenke na otutu ihe nke oge gara aga, na-achoputa ihe ohuru nke oge ufodu, nke na-achota ufodu n'ime ihe omimi ihe omuma nke ndi mmadu mara rue mgbe ahu.
Ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme dị ọtụtụ. Na Mesopotemia oge ochie, Shem-an-na ma ọ bụ "nkume ọkụ" sitere na ọlaedo na platinum. N'Ijipt oge ochie ebe akpọrọ aha ya mfkzt (ọcha ntụ ntụ nke ọlaedo), ha bụ onyinye nke ndị Farisii. Otu n'ime ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-ezo aka na ya bụ ili ili pyramidal nke King Unas na Saqqara. Site na Babịlọn ruo Tobes ma mesịa gaa Atens, naanị okwu ahụ gbanwere, Ormus taa, Manna, Ka, ọkà ihe ọmụma, ụnyaahụ. Nkọwa nke ihe onwunwe nke ihe ochie a na-adịgide karịa afọ.
Akụkọ ahụ malitere na Phoenix (Arizona) na 1976. Ụfọdụ David Hudson, onye bara ugbo na-eto eto na otutu iri puku acres nke ala bu isi ihe omumu a.
Na Arizona, ala dị ọgaranya na Sodium na a ghaghị mesoo ya na concenturic acid concentrated. Ya mere, mmiri a na-ejikọta na mmiri ji nwayọọ nwayọọ na-agbaji ntụpọ alkaline na site n'ịgbakwunye calcium carbonate e nwetara ala dị mma maka ịmalite na afọ ole na ole. Enweghi ike ịbanye na nyocha nke ụzụ, n'okpuru ọgwụgwọ ndị ahụ, ala akọrọ malitere ịmị ọkụ na-acha ọkụ, mgbe oké mmiri ozuzo gasịrị, mgbe nke a gasịrị " acha ọcha edo "Wepụ kpamkpam, mgbe ahụ, cyclically laghachiri mgbe oké ifufe ...
Ala nke mgbawa nke mpaghara a maara na ọ nwere ihe ndị dị obere ma nwee ọla ndị dị oké ọnụ ahịa, Hudson na-eme ụbọchị dị mma iji nyefee nchịkọta zuru ezu. Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na nyocha na-achọpụta na ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ na-eme nchọpụta ọ bụla: enweghị njirimara nke ọma, ọ dịghị mmeghachi omume nke kemịkal ma ọ bụ na a hụghị mpempe akwụkwọ spectroscopic! Otu n'ime ndị na-eme nchọpụta ahụ kwadoro ịgbatị nyocha nke ụdịdị. Ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ọdịiche dị iche iche na-amalite ịpụta, a na-ekpughe ọnụnọ nke ọlaọcha ndị dị oké ọnụ ahịa, ọ ga-eju onye ọ bụla anya.
E mechara chọpụta ihe a: ngwakọta nke ígwè, silica na aluminom na karịsịa 98% nke ezigbo metal nke otu platinum (ruthenium, Ahịa, Iridium et Osmium) nke ahụ weere maka " rien ".
Ná mmalite nke afọ 90, ndị ọkà mmụta sayensị bịara nkwubi okwu ndị a: ORME nwere ụdị nke superconductivity (ọbụla ọkụ nwere ike ibunye ha) na dịka ọnọdụ okpomọkụ nke ha na-edozi ha yiri levitate. Ihe ndị a na-agbapụ aka na-agagharị ma na-ese n'elu mmiri. Ha bụ ndị na-achịkwa àgwà ọma, na elu spin ", Na oghere magnet na efu, na-agbanyekwa ogwe aka magnet na ndịda.
Na tiori nkeHal Phutoff sur « ike ike Ogologo oge na-achọta ebe a na-eme nchọpụta ekele maka ORMUS ọbụna nkwado. Ihe na-adabere ebe a bụ na ihe ahụ nwere ike ịghọ onye a na-adịghị ahụ anya, gbanahụ ụzọ anyị si ele ohere anya ma gbanwee akụkụ a nke ohere oge.
Dịka ọmụmaatụ: " Hudson kwuru na ọ bụrụ na ORMUS iridium na-ewe iwe ọkụ na 850º Celsius, ọ ga-apụ ma funahụ ya niile. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-adaghachi ọzọ, ọ ga-enweta ya ma nwetaghachi ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị dị na mbụ. The patent Hudson nwere nchịkọta nchịkọta nke ngwaọrụ thermogravimetric mere nke gosipụtara mmetụta a.
« N'ihe gbasara physics, ndị ọkà mmụta sayensị egosila n'oge na-egosi na okwu nwere ike ịbụ ebe abụọ n'otu oge. Ugbu a ka anyị maara na, n'ihi nnukwu ihe mgbagwoju anya, ihe dị iche iche nke ọnwa dị iche iche nwere ike ịbụ na mmekọrịta na-enweghị mmekorita nkịtị. »
Dị ka Hudson si kwuo, ndị electrons si otú ahụ na-emegharịghachi ga-abụ ụzọ abụọ nke Cooper (onye na-ede akwụkwọ nke nkwalite omume rụrụ arụ), ma eleghị anya ọ ga-abụ nke na-emekarị ka ọ dị elu n'oge okpomọkụ.
Usoro ihe omuma nke ihe ndi a bu uzo nke uzo di ndu. Site na nke a, ihe omimi zuru oke nke ndụ nwere ike ịkọwa ya site na njikọta ọnụ; nke ahụ bụ, ọrụ doro anya na-arụ ọrụ (dị ka oge ochie thermodynamics) nke mkpụrụ ndụ ihe ndị dị ndụ na-achịkwa site n'otu ụkpụrụ ahụ dị ka ndị na-achịkwa ọrụ nke laser. Ihe omuma a nke otutu ndi mmadu na-eleba anya na ndu Mae-Wan Ho. Ọrụ na-adịbeghị anya emeghewo echiche ndị na-enye obi ụtọ na biology. Ọ bụ ezie na obere akụkụ nke DNA na-arụ ọrụ site na ntinye protein, nnukwu (nke a kpọrọ dị ka DNA n'efu) na-arụ ọrụ n'adabereghị na kemịlị iji gwa ubi ahụ. kwantum Nke ahụ. N'aka nke ozo, otutu akwukwo di iche iche na ihe ndi di ndu ga-akwado nkwenye banyere Hudson banyere oru nke ORMUS na DNA; ụfọdụ pụrụ ọbụna idozi ọnyá nke ọzọ.
Ekwuwo ọtụtụ ugboro na Ormus nwere ike ịgụ "akụkọ banyere ahụ ike"Site n'aka onye ọrụ ya, ụfọdụ akụkọ mmetụta, ihe ojoo, n'akụkụ dị iche iche nke ahụ metụtara oge ochie dị ka à ga-asị na Ormus gara n'oge gara aga, nyochaa ihe niile, iji hụ ma mgbanwe ọ dị mkpa.
E nwere akụkọ banyere ọtụtụ ntipụta dị mma site na ndị dọkịta na ndị ọkachamara nwere nghọta na ọtụtụ mba, Otú ọ dị - ọ bụghị ihe ijuanya - a naghị anabata ụdị okwu ndị a n'akwụkwọ akụkọ ahụike.
Otu ụbọchị, nwanne nna ya nwoke, bụ onye nwere mmasị na nwa nwanyị, na-atụ aro njikọ na " acha ọcha edo "Ndị ụfọdụ na-emepụta ihe, bụ ntụ ntụ na ihe ndị na-agwọ ọrịa bụ ndị a maara iji mee ka ndụ dị ogologo. N'ịbụ onye nwere mkpali, Hudson na-eji usoro ORMUS mee ihe na nkịta nwere kansa na piroplasmosis. Ndị na-agwọ ọrịa na ndị ọrụ afọ ofufo nke mmadụ na-etinye onwe ha n'ule ahụ, na-enweta ezi ihe. Hudson kesara ụfọdụ dọkịta ndị ọkachamara na-agwa ha ka ha na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala. Ngwọta dị iche iche ga - egosiputa, n'ụzọ dị iche iche, okwu ndị e mesịrị na Hudson, ndị na - ezigakwa ihe nrịbabara na ọtụtụ ụlọ nyocha, gụnyere Merck & Co. na National Cancer Institute. Ndị nke a ga-etinye ya na omenala cancer na-ekwu na ọ dị mma.
Nke ahụ kwuru, ọ dịghị mkpa ka ichere ka sayensị jiri uru a chọpụta. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na-adịchaghị mma, n'otu oge ahụkwa, ala nke ala ara na-ejedebeghị ma bụrụ nke a na-emekarị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ọbụna imepụta okpukpu abụọ site na nkwadebe a dị ala site na mmiri mmiri, egwu nke ụnwụ ga-eme ka ụba buru ibu. Ọbụna na - enweghị ORMUS dịka ihe mgbakwunye nri nri, a ga - emeziwanye ahụike ụmụ nwoke. Tụkwasị na nke a, ebe ọ bụ na mmiri apụghị ịmegharị mmiri, ọ na-esiri ike ịhụ ọtụtụ mba na-etinye aka n'ahịa a ma mee ka ọ bụrụ ndị ọrụ ugbo nke atọ.
Kedu ka osisi, ụmụ anụmanụ na ụmụ mmadụ si agbapụta ihe ndị a? Mmiri ha dị elu na mmiri mmiri na-atụ aro na ka oge na-aga, a dọrọ ha ọdụ. Nke a nwere ike ịkọwa nhụsianya na-arịwanye elu nke ọtụtụ ala. Tụkwasị na nke ahụ, nkedo nke ahịhịa na-eme ka ụba carbon monoxide na-abawanye elu ma si otú a na-eme ka okpomọkụ dị n'ụwa. Enwere ike imebi nke a site n'ịgwọ nnukwu mpaghara ala na ORMUS, dịka ọmụmaatụ site na mbara igwe, karịsịa na oke ohia. Tụkwasị na nke a, iji dochie mmanụ ala, enwere ike ịba ụba nke osisi na-amịpụta mkpụrụ ndụ n'ọtụtụ ebe.
A nọgidere na-ahụ na mmepụta na-abawanye ọzọ na afọ nke abụọ na nke sochirinụ mgbe a gwọchara ya. Nke a bụ ma eleghị anya na eziokwu ahụ bụ na ORMUS na-eme ka ala ahụ dịkwuo ala mycorrhizae, dị ka mkpụrụ osisi ọgwụ dị mkpa maka uto nke osisi, ọ dị mkpa ka a ghọta ya dị mkpa n'ihi na ngafe nke chemical fertilizers na herbicides dị egwu.
N'afọ mbụ nke ọgwụgwọ, osisi pọm osisi na-amịpụta mkpụrụ okpukpu okpukpu okpukpu okpukpu abụọ karịa nke osisi ahụ; na mgbe afọ abụọ gasịrị, ọnụ ọgụgụ ahụ abawanyewo site na ise!
Ihe kwesiri ekwuru bu ndi oranges nke nke cantaloupe melons ...
A makwaara na osisi osisi ORMUS abụghị nanị na-arụpụta ihe, ma tozuru oke na mbụ, chọrọ obere fatịlaịza ma bụrụ ndị na-eguzogide ọgwụ na pests. Ke adianade do, mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ!
Mụ onwe m anwawo ORMUS na poteto. N'ime ahịrị anọ nke ụdị abụọ dị iche iche, a na-emeso mmadụ abụọ na ndị ọzọ abụọ natara nha mmiri. Nsonaazụ: kg 14 maka njikwa, kg 26 maka osisi a na-emeso ya. Enwetara m carrots n'elu 450 grams ...
A chọpụtara na ukpa a na-emeso ruo ọtụtụ afọ arịbaala okpukpu abụọ karịa ndị ọzọ ma mepụta ugboro isii ọzọ; dị ka mkpụrụ osisi n'onwe ha, ha dị oke ka mandarins!
Ilebaghachi anya na ntanetị n'ahụ. A cat nke furu ọdụ ya n'ihe mberede mgbe ọ dị otu ọnwa.
Mgbe ọgwụgwọ na Ormus na nri ya na n'ọnụ ọdụ ahụ, e nwere nchịkọta nke 6cm mgbe ọnwa 2 na ọkara.
Enwekwara ntutu isi na ntutu na ORMUS ọla kọpa ingestion mgbe otu afọ ruo afọ abụọ.
Ebumnuche ORMUS bụ ihe ndị dị oké ọnụ ahịa dị na ha, n'ụdị ha na-abụghị nke metallic.
Na nke a, ha dị ọtụtụ karịa ka ha dị n'ụdị ha dị mma.
IHE ORMUS bụ mineral na-edozi ahụ dị mkpa maka ụdị ndụ ọ bụla.
Ọtụtụ ndị akaebe na-agba akaebe maka mmelite nke ọnọdụ ahụike ha mgbe ha nesịrị ihe ORMUS dị iche iche.
Ihe ndị a nwekwara ihe dị iche iche. Mgbe ụfọdụ ha na-apụ, levitate ma ọ bụ gafee mgbidi siri ike. Ha dị ka ihe eji eme ihe n'oge ochie site na ndị ọkachamara. Ha na hamana"Akwụkwọ Nsọ,"shewbread", Nye Eze Solomọn Eze na"mfktz"Ndị Ijipt, nke Laurence Gardner dere n'akwụkwọ ya bụ" Nzuzo furu efu nke Igbe ahụ dị nsọ ". Ihe odide oge ochie, Hindu na Chinese, na-ezo aka na ihe yiri ya na ihe ndị yiri ya.
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-azọrọ na ihe omume ORMUS na-eme ka ikike ikike mmụọ na ikike ime mmụọ mụbaa.
IHE ORMUS sitere na ikuku, mmiri na ala.
Ịba ụba nke ha na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịpụ na itinye uche ha chọrọ ụzọ dị mfe na usoro ntinye. IHE ORMUS bụ ihe ndị dịka omenala omenala ndị nakweere ụdị nrụpụta dị iche. Ya mere, ọ ga-abụ ọnọdụ 4 nwere ike ime, ma e wezụga ike siri ike, mmiri mmiri, na gas anyị maara. Enwere njikọ dị mkpa, lee isi, n'etiti "ọhụrụ"Nkwupụta nke okwu, nke ndị ọkachamara na-ahụ maka millennium, na ihe dị iche iche nke ike a.
Anyị na-achọ ime njikọ n'etiti okwu na etheric ...
Banyere mmiri, anyị maara na o nwere ihe kariri hydrogen na ikuku oxygen.
Otu galọn nke mmiri distilled atọ dị arọ na-emetụta 8 pound, mgbe otu galọn nke laabu-synthesized mmiri si oxygen na hydrogen weighs 7 pound. Mgbe anyị na-achọpụta na ihe ndị dị na steeti m na-edozi na mbara igwe, nakwa na ha nwere ike ịzo n'ime mkpụrụ ndụ ahụ, ọ ga-adị mfe iche na ihe ndị a " nouvelles "Ndị ọkà mmụta sayensị ọdịnala achọpụtabeghịrị ya ma bụrụ akụkụ dị mkpa nke mmiri.
Nke a pụkwara ịkọwa mmetụta nkemémoire"Na programmability nke mmiri.
Nkeji edemede na UAE (pịa foto iji nweta isiokwu):
Kemgbe narị afọ gara aga ma karịsịa kemgbe ụbọchị Albert Einstein, ndị ọkà mmụta sayensị agbasowo ọchịchọ maka Grail Graị nke nkà mmụta sayensị nke oge a: "nkwupụta dị n'otu". Nke a emeela nchọpụta dị ịrịba ama na mmuta nke asụsụ ọhụrụ ọ bụla nke na-agụnye supercorders, ebe a na-achọpụta ihe, na ịmalite ịba ụba, yana ịmara atụmatụ dị adị, amaghị ya ruo ugbu a, karịa ebe anyị nwere - oge maara.
N'ihe gbasara physics, ndị ọkà mmụta sayensị egosila n'oge na-egosi na okwu nwere ike ịbụ ebe abụọ n'otu oge. Ugbu a anyị maara na n'ihi "entanglement"Ihe dị iche iche nke ọtụtụ nde afọ dịpụrụ adịpụ nwere ike ịchọta na kọntaktị ma ọ bụrụ na ị gaghị ahụ ya. Enwere ike ichikota oge, ngwa ngwa na-aghọ ihe dị adị, a mara ọkwa ihe ndị na-agbapụ agbapụ maka njem ụgbọ elu, na nkà mmụta sayensị dị iche iche na-enye anyị nghọta ka mma banyere ọnọdụ hyperdimensional.
Mgbe, na Genesis nke Grail Kings, m na-abịakwute àgwà nke monoatomic gold na platinic metals, M hụrụ na ọ ga-adị ogologo tupu enwe nke ndị a dị mma ọla. lelee nhazi nke mmanụ ọkụ nke na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi. Agwara m ha na ndị a ga-akwado mmanụ ala maka njem na ngwa ndị ọzọ bara uru. N'otu oge ahụ, ekwuru m banyere ọdịnihu ha na nkà mmụta ọgwụ, na karịsịa n'ịgwọ ọrịa cancer. Karịsịa, ana m enyocha àgwà ndị antigravitational ndị a na-acha ọcha powders na ike ike ha nke nwere ike ịgbanarị oge ohere.
Ihe dị ịtụnanya banyere enigmatic, elu-spinning, na-acha ọcha edo edo na metal platinoid bụ na nchọpụta ha abụghị n'ezie. Ndị Mesopotamia oge ochie kpọrọ ya Shem-ihe-na ndi Ijipt we gosi ya mfkzt (Nsụgharị nke ihe odide odide na-agba ụdaume), ebe ndị Aleksandria na-asọpụrụ ya dịka onyinye nke Paradaịs, na ndị na-emecha chemists, dị ka Nicholas Flamel, kpọrọ ya Nkume Onye Ọkà Ihe.
N'oge nile nke akụkọ ntolite, "ntụ ntụ"E weere ihe dị nsọ ka o nwee ikike pụrụ iche nke levitation, transmutation na teleportation. E kwuru na ọ ga-emepụta ìhè na ọkụ na-egbukepụ egbukepụ, ebe ọ bụ na ọ bụ isi ihe na-eme ka ndụ ogologo ndụ. N'ụwa taa, ụlọ akwụkwọ nke Advanced Studies (Austin, Texas, USA) ekwuola ihe a dị ka "ihe omuma", Na njedebe ya (otu n'ime àgwà ndị bụ isi) ka Center for Advanced Studies (University of Illinois, USA) kwupụtara dịka"ihe kachasị dị egwu nke eluigwe na ala".
« Akụkọ ahụ na-ekwu na Moses were nwa ehi ọlaedo ahụ, gbaa ya ọkụ ma tinye ya na ntụ nke ọ na-enye ụmụ Israel nri. »
Otú ọ dị, ihe odide oge ochie na-egosi n'ụzọ doro anya na a mara na àgwà ndị na-ezighị ezi ma ọ bụ mmepụta ihe na-eme ka a mara, ma ọ bụrụ na ha aghọtaghị, na ụwa dị iche iche nke levitation, nkwurịta okwu Chineke, na ike dị ukwuu nke ndị ọrụ eletrik. Na akụkọ ifo ndị Gris, ọchịchọ nke ihe a bụ n'etiti etiti akụkọ banyere Golden Fleece, ebe ọ bụ na okwu Akwụkwọ Nsọ ọ bụ ngalaba dị omimi nke Igbe Ọgbụgba Ndụ ahụ, ọla edo ahụ nke Mosis weghachite Saịnaị, bụ nke e mesịrị chebe n'ụlọ nsọ Jerusalem.
N'agbanyeghi ihe a niile, akwukwo nke mbu bu nke mfkzt ntụ ntụ nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa. Ọ na-apụta n'ụzọ dị nnọọ iche n'ihe odide nke pyramid Ijipt; ihe odide dị nsọ nke na-eme ka ili nke pyramidal nke Eze Unas nke Ọchịchị nke 5 na Saqqara. Ọ na-akọwa ebe a na-ewere eze ka ọ dị ndụ ruo mgbe ebighi ebi na chi dị iche iche, a na-akpọkwa ebe a Field of Mfkzt, saịtị nke etheriki nke e jikọtara ya na akụkụ azu azu a na-akpọ Ala nke Onye A gọziri agọzi.
Ebe ọ bụ na usoro ihe omimi ndị e jikọtara ya na ọlaedo nwere ihe ọmụma alchemical, na ebe ọ bụ na a na-eji ntụ ọka monoatomic, ọ bụ ezie na ọ bụ nke a na-ejikarị ọlaọcha mara mma,nkume", Ka anyị nyochaa ihe odide nke narị afọ nke 17 site n'aka onye na-eme nri ndụ bụ Eirenaeus Philalèthe [: Aghọtaghi okwu French]. Onye a ma ama nke Britain, onye Isaac Newton, Robert Boyle, Elias Ashmole na ndị ọzọ dịkọrọ ndụ, bipụtara na 1667 otu akwụkwọ aha ya E kpughere ihe nzuzo [Ihe nzuzo ndị a na-ekpughe]. N'akwụkwọ a, ọ na-enyocha ọdịdị nke Onye Ọkà Ihe Ọmụma, nke a ga-enwe ike nwee ike iweghasị metal na-abaghị uru n'ime ọla edo. N'inye ihe n'usoro, Philalethes kwubiri na Nkume ahụ bụ ọla edo ma na nkà nke ọkà ihe ọmụma ga-eme ka usoro ahụ zuo okè.
Nkume anyị bụ ihe ọ bụla mana ọlaedo nụchara ka ọ bụrụ ihe kachasị elu nke ịdị ọcha na aghụghọ.
Ná nkwekọrịta ọzọ nke isiokwu ya Nduzi di nkenke nye mkpuru umuaka [Nchịkọta Ntuziaka Nye Ụmụaka nke EluigwePhilalethes na-ekwuputa: A na-akpọ ya Pita n'ihi ọdịdị ya; ọ na-eguzogide ihe ọkụ na nkume ọ bụla. N'okwu a, ọ bụ ọla edo, dị ọcha karịa nke kachasị ọcha, ọ dị edozi na incombustible dị ka nkume, ma n'ọdịdị ọ bụ ezigbo ntụ ntụ. Oge ụfọdụ n'oge gara aga, na narị afọ nke 15, onye France na-eme nri Nicolas Flamel dere na Agba Ochie ya, nke a na-ede na 22 November 1416, na mgbe a na-eme ka ígwè dị mma ma dịchaa, ọ ghọrọ "ezigbo ntụ ntụ"Nke bụ Nkume Onye Ọkà Ihe Ọmụma.
« A na-akpọ ya Pita n'ihi ọdịdị ya; ọ na-eguzogide ihe ọkụ na nkume ọ bụla. N'okwu a, ọ bụ ọla edo, dị ọcha karịa nke kachasị ọcha, ọ dị edozi na incombustible dị ka nkume, ma n'ọdịdị ọ bụ ezigbo ntụ ntụ. »
Akụkọ a adịla ogologo oge ka ndị ọkà mmụta okpukpe gbagwojuru anya, n'ihi na ikpughe ọlaedo na ọkụ apụtaghị na ọ bụ ntụ ọcha, ma gbazee ọlaedo. Otú ọ dị, mgbe e mesịrị n'akụkọ ahụ, a kọwara na a pụrụ ikpokọta ntụ ọka a dị mma na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ ma ghọọ achịcha achịcha na-acha ọcha, bụ nke Bible oge ochie nke Septuagint kpọrọ "nri nke ọnụnọ".
« Ọ bụ na Karnak na, gaa na 1450 av. J.-C., Thutmes nke Atọ mere ntọala ya nke Master Craftsmen metallurgists. Ha na-ekwu na Òtù Na-ahụ Maka Nwanyị White White, bụ aha a na-ekwu na ha na-enweta ọrụ ha na ngwongwo na-acha ọcha ọcha. »
Ihe ndia nile ka agwakota na ihe mgbagwoju anya na akuko nke oku n'ugwu na ihe di nkpa nke ogbugba ogbugba nke di nkpa nke cherub, nke bu nkpu ya n'onu ya. N'ihe metụtara nri nke ọnụnọ, a na-akpọkwa akụkụ ọkụ ndị a nke Igbe ahụ dịka "ọnụnọ ahụ"(O doro anya na ọnụnọ nke Chineke), ndị Gris kpọrọ ya electrikus.
Na Babịlọn oge ochie, a na-akpọ enigmatic elu ntụ ntụ ọcha bụ an-na nke pụtara "ọkụ"Ndien ke ini ẹketọn̄ọde enye ọyọhọ udọn̄ọ emi, enye ama ọtọn̄ọ ndinam ikan̄ ke ikan̄. Dị ka Bible si kwuo, ụmụ Israel na-ezo aka na ntụ ntụ ntụ dị ka manna, nke yiri nke yiri ya. Na Antiquities nke ndị Juu, na narị afọ mbụ, Flavius ​​Josephus kọwara na okwu ahụ bụ mana bụ n'ezie ajụjụ: "kedu ihe ọ bụ?", Akwụkwọ Ọpụpụ kwadoro nke a:"ha kpọrọ ya manna n'ihi na ha amaghi ihe o bu".
Nke a kwekọrọ na mkpughe nke ndị isi na Akwụkwọ nke Ndị Nwụrụ Anwụ (nke a na-akpọ papaịrọs Ani). Ihe odide a nke narị afọ nke 18 na Thebes, nke Museum Museum nke 1888 nwetara, a gosipụtara ya nke ọma ma mee ihe karịa 23 mita ogologo. Na ememe a nke oge ochie, nri nke ọnụ na-ejikọta na ụja nke na-achọ "njedebe ikpeazụ"Ndien, ke utịt ọfiọn̄ kiet emi enye akade, enye ama obụp mbụme emi:"Kedu ihe ? "
Ihe odide ndi ozo di ka n'agbata puku afo abuo BC, o doro anya site na ala nke ugwu Serabit na Sainai na ndi eze Ijipt choputara mana manna nke gold banyere afo 2180 tupu J.-C. C. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ndị maara ihe nzuzo nke mmepụta ya bụ ndị na-eso ụlọ akwụkwọ ihe omimi (Masters Craftsmen), na Onye isi nchụàjà nke Memphis n'ọdịnihu na-ebu aha Grand Artificer.
" Mbido ikpeazụ"(Ma ọ bụ, dị ka ndị Grik kpọrọ ya: gnosis), bụ ezigbo ọchịchọ na-adịgide adịgide. N'ihi na na e wezụga ahụ nkịtị, anyị kwesịrị inwe "ahu nke ìhè"Onye kwa, kwesiri ka a zụlite ma lekọta ya ka o wee too. "ahu nke ìhè"A kpọrọ ya ka ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụzọ dị irè ụdị ndụ, a na-ewere ya na ọ nọgidere na-arụsi ọrụ ike mgbe ọ nwụsịrị. Ihe oriri nke ka bụ ìhè, nke na-eme ka ìhè na ìhè nke na-emepụta ihe dị mma, na-acha ọcha edozi ntụ ntụ.
Idebe ozi a n'obi na icheta na akụkụ nile nke nchọpụta ndị dị otú ahụ abụwo isi ihe ndị na-agba ajụjụ banyere ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ndị ọkà mmụta okpukpe na ọbụna ndị ọkà mmụta sayensị, anyị ga-agazi nso ugbu a.
Ịhapụ Middle East, akụkọ anyị na-aga n'ihu na America, ebe ọ na-adịkarị, ihe omimi nke sayensị a na-echefu echefu egosighi na nso nso a. Ọ bụghị nanị na nsogbu ahụ amaliteghachiri ibute ụzọ n'ịchọpụta usoro nchịkọta physics, ma akụkọ banyere ọgbụgba ndụ nke ọgbụgba ahụ, akụkọ ndị na-egosi ìhè, levitation, na ihe ndị ọzọ dị nsọ nke ihe odide oge ochie, bụ na mberede ghọrọ eziokwu sayensị nke oge a.
A kọọrọ akụkọ banyere nchọpụta mbụ a 1996 na ihe NEXUS site na onye ọrụ ubi David Hudson si Phoenix, Arizona. Ọ kọwara na ala ya nwere nnukwu sodium ọdịnaya nke mere ka mmiri dị elu ma mee ya mmiri. Iji dozie nke a, (na 1976), o tinyere sulfuric acid n'ime ala iji mebie ntụpọ a ma nye ya otu agbanwe agbanwe. Mana site n'inyocha ihe ndị ahụ nke acid ahụ kpochapụrụ, ọ chọpụtara na otu n'ime ihe ndị ahụ nwere ihe dị iche iche. N'ịbụ nke anyanwụ Arizona na-ekpo ọkụ, ihe a na-enwusi ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọcha wee kwụsị kpamkpam. Otú ọ dị, na nyocha nke ntụgharị uche, ihe a gbanwereadịghị ọcha"!
Mgbe enweghi ule a na-enweghi aka na Mahadum Cornell, e zigara otu akwụkwọ na Harwell Laboratories na Oxfordshire, England, maka nhazi ntinye aka, ma nke ahụ ekweghị njirimara dị mma. N'ikpeazụ, site n'enyemaka nke ụlọ ọrụ Soviet Academy of Sciences, e kwubiri na ihe a dị omimi na-acha ọcha bụ nke a na-agụnye metal platinid n'ụdị a na-amaghị na sayensị.
Ka nnyocha a na-aga n'ihu, a na-ekpo ọkụ ọkụ ma na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ dị ọkụ ma na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka mmụba ya dị arọ. A chọpụtakwara na n'otu oge okpomọkụ, a na-ekpocha pearl ahụ ka ọ ghọọ monoatomic ntụ ntụ (otu aturu) ma n'oge a, ịdị arọ ya dị nnọọ njọ na 56% nke ibu dị arọ. Mgbanwe nke okpomọkụ na 1160 Celsius C gbanwere ihe a dị oké ọnụ ahịa n'ime iko doro anya nke ọma, ebe ibu ya dị na 100% mbụ. O yiri ka ọ gaghị ekwe omume, mana ahụmeghachiri ahụ ugboro ugboro!
N'ịbụ ndị gbagwojuru anya, ndị ọkà mmụta sayensị nọgidere na-enyocha ha. Site na ikpo oku na okpukpu obi ugboro ugboro, n'okpuru ikuku miri emi, ha choputara na mpaghara nke na-ekpo ọkụ were ihe nlele ahụ na oke nha nke yiri 400 ugboro uru ya; ma site na ikpo ya ọkụ, ibu dị njọ ma ọ gwụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, uru kachasị njọ. Mgbe ha wepụrụ ihe nlele ahụ site na tray ahụ, ha ghọtara na ihe atụ ahụ dị arọ karịa mgbe ihe ahụ dị na ya nakwa na ihe ahụ nwere ihe onwunwe nke ibufe oke ya na ihe dị na ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọbụna ala ahụ dị larịị na-efunahụ! Nke a kwekọrọ kpọmkwem n'ihe odide alchemical n'oge ochie, nke 2000 afọ gara aga kwuru banyere Paradaịs Paradise bụ: "ihe onwunwe ahụ karịrị ibu ọnụ ahịa mbụ ya nke ọlaedo, ma ozugbo a gbanwere ghọọ ájá, ọ dịghị etinye aka na ntụ".
Emekwara ka o doo anya na ihe ahụ bụ ihe okike na-enweghị ihe ọkpụkpụ nke nwere oghere magnet, na-agbanyekwa ogwe aka magnet nke dị n'ebe ugwu na nke ndịda, mgbe ọ na-enwe ike nke levitation ma na-echekwa ụdị ọkụ na ike ọ bụla.
N'oge a, David Hudson zutere Dr Hal Puthoff, Director nke Institute of Advanced Studies na Austin, Texas. Na nyocha ya na ike na ike ndọda dị ka ike na-agbanwe agbanwe, Puthoff kwadoro na mgbe ihe malitere ịmeghachi na akụkụ abụọ (dịka samples na-eme), ọ ghaghị ịzụlite ya Ghọta banyere 4 nke itoolu nke oke arọ ya. Nke a bụ ihe gbasara 44%, kpọmkwem ọnụ ọgụgụ sitere na nyocha ndị ahụ na-acha ọcha ntụ ntụ.
Ya mere, Hudson nwere ike ikwenye, site na omume, nkwupụta nke Puthoff, na, mgbe monoatomic ntụ ntụ na-agabiga n'ọnọdụ omume rụrụ arụ, ọ na-ebo 56% ebubo mbụ ya; nakwa na mgbe ọ na-ekpo ọkụ, o nwere ike ịdakwasị ọnọdụ nchịkwa nke na-erughị efu, nke mere na n'oge a, efere ahụ dị ntakịrị karịa mgbe ọ bụ ihe efu.
N'ikpeazụ, site n'enyemaka nke Soviet Academy of Sciences, e kwubiri na ihe a dị omimi na-acha ọcha bụ nke a na-agụnye akụkụ metal platinic n'ụdị a na-amaghị na sayensị.
Site na ikpo ọkụ ma na-ajụkwa oyi ugboro ugboro, n'okpuru gazinertes, ha chọpụtara na mpaghara ahụ na-ekpo ọkụ na-ebu ihe nlele ahụ na oke nha nke yiri 400 ugboro mbụ nchekwa; ma site na ikpo ya ọkụ, ibu dị njọ ma ọ gwụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, uru kachasị njọ. Mgbe ha kagburu sample tree, ilss'aperçurent na ọ bụ arọ karịa mgbe lematériau bụ n'ebe na umi nwere ala-onwunwe nyefee ya weightlessness na ihe na ihe ndị e dere na ya. ···
Dị ka ike ndọda na-ekpebi oge ohere, Puthoff kwubiri na ntụ ntụ bụ "ihe omuma", Nwere ike na-ehulata ohere-oge.
Otú ọ dị, ntụpọ mfkzt ahụ (na-adabere na tiori) na-adagharị n'ọnọdụ ọzọ, nke ikpe ahụ ga-abụ nke a na-apụghị ịhụ anya. Hudson gosikwara na nke a bụ ikpe ziri ezi: nlele ahụ lara n'anya dị ka ibu ya dị n'anya.
Ihe anyi na ekwu okwu abughi nani ihe omuma nke efu, kama obu na ebughari ya na uzo ozo, uzo ise nke oge oge. E gosipụtara ngosi ahụ mgbe otu onye gbalịrị ịkwaga ma bulie ya na ọdụ, nke mere na ọ bụrụ na ọ pụta ìhè, ọnọdụ ya dị iche. Ma nke ahụ emeghị, ihe niile ahụ mepụtara kpọmkwem n'otu ọnọdụ na ụdị dị ka ọ dị ná mmalite. Ọ dịghị ihe ọ bụla enwere nsogbu n'oge oge a na-adịghị ahụ anya, n'ihi na ọ dịghị ihe dị na setịpụrụ. Na nkenke, enweghi ike ịhụ ihe ahụ, ọ gbanwere ọnọdụ anụ ahụ ya ma mee ka ọ gaa n'akụkụ ọzọ.
Dr. Puthoff kọwara na ọ dị ka ọdịiche dị n'etiti ụgbọelu stealth, nke radar na-apụghị ịhụ, na ụgbọelu nke ga-agafe n'akụkụ ọzọ.
Nke a, bụ akụkụ dị elu nke Orbit nke Ìhè ma ọ bụ, dịka edere ya na ili ndị Ijipt, Du Champ de Mfkzt.
Ná mmalite nke afọ 1990, a malitere ịdepụta ihe gbasara ịbanye na stealth na na-eme ka a na-ebipụta ya mgbe nile na ndị ọkà mmụta sayensị. The Niels Bohr Institute na Mahadum nke Copenhagen na Argonne National Laboratories na Chicago na Oak Ridge National Laboratory, na Tennissee, dabere na US Department of Energy, gosikwara na niile ọcha chọpụtara site Hudson na-adị na na monoatomic ala. Ndị a gụnyereor na otu nke metallic metals: theiridium, na rhodium, napalladium, na platinum, Theosmium na ruthenium.
Na ịgba akwụkwọ ya nchọpụta Kemịkalụ, Hudson mere edida bekee ka ọcha na monatomic mmegharị orbital (EMRO) [Translator si dee: ELM English], na nkà mmụta sayensị na ala akọwa onu bụ monatomic "akwa mgbagwoju anya dị elu". Ihe ndị a na-achịkwa n'ihi na mkpụrụ dị elu nwere ike ịnye ike site na otu na-enweghị onye ọ bụla funahụrụ ya.
Mgbanwe nke oge ohere nwetara mmasị pụrụ iche, nke mepụtara ọkwa mara mma na Classical na Quantum Gravity na May 1994. Onye edemede ya, onye ọkà mmụta sayensị na mpempe akwụkwọ Mexico bụ Miguel Alcubierre, kwuru, sị:
"Ugbu a, anyị maara na ọ ga-ekwe omume ịgbanwe oge ohere iji mee ka ụgbọelu na-aga njem na-agba ọsọ ọsọ naanị site na mgbasawanye mpaghara nke ohere-oge n'azụ ụgbọ ahụ na mgbagwoju anya na ohere. tupu; otu ihe ngwa ngwa karịa ọsọ nke ìhè, na-agbachitere mgbagwoju anya nke akụkọ sayensị".
Nke a gbasoro ọnwa ole na ole ka e mesịrị site otu isiokwu dị na American Scientist ("Ndị na-ede akwụkwọ na Space-Time"Vol. 82, pgs. 422-3, October 1994). Na nyocha a, Michael Szpir gosiri na echiche Alcubierre adịghị emerụ echiche Einstein na ọ dịghị ihe nwere ike ịgafe ngwa ngwa. Ọ kọwara na mgbe ọ nọ n'ụkọ, ụgbọ mmiri ahụ adịghị eme njem n'ezie. Ọganihu a na-ekwu banyere ya ga-aba ụba, mana ọganihu ga-abụ efu.
Dị ka ike ndọda na-ekpebi oge ohere, Puthoff kwubiri na ntụ ntụ bụ "ihe omuma", Hụ na ị ga-ehichapụ oge ohere. Hudson gosikwara ọzọ na nke a bụ kpọmkwem ikpe ahụ: sample ahụ lara n'iyi dị ka ọhụụ mgbe a kagbuola ibu ya.
Anyị nwere ebe a ụzọ njem na ọsọ nke ìhè nke chọrọ nanị ntakịrị oge na obere mmanụ ụgbọala ... ma ọ bụ naanị na oge kwesịrị ekwesị oge ohere na-egosi na-akpali site n'ihu nke ụgbọ mmiri na-reposition onwe ya azụ, ekele, ọzọ, na mgbagha na mmeba.
Ma olee ngwaọrụ ọ chọrọ?
N'ikpeazụ, British BBC News Scientific Editor, Dr. David Whitehouse, kọrọ, sị: Echiche a dabeere n'echiche bụ na, maka ndị ọkà mmụta sayensị, ohere adịghị efu ... Space nwere ọdịdị nke nwere ike ịbụ gbagwoju anya site na okwu ... Ogbe a ga-ezu ike n'igbu afia n'etiti ngbawa abuo nke ohere.
Gịnị bụ nke a?ihe omuma"Olee nke Alcubierre na-ezo aka? Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ya na-erughị zero. Szpir kọwara ya dika "ihe onwunwe nke nwere ihe dị egwu nke njedebe na-adịghị mma, n'adịghị ka ihe nkịtị (nke ndị mmadụ, mbara ala na kpakpando mere), nke ike ya dị mma. "
Ngwa osisi ahụ dị mkpa bụ onye na-eme ihe ngosi; na Hal Puthoff ama akọwaworị na, na nke a, na mfkzt Phoenix bu ihe omuma ihe nke nwere ihe ndi mmadu ji eweputa ohere oge.
Ka anyị laghachi azụ, anyị nwere ike ile anya ọzọ ORMS na ndi ozo ndi Ijipt na ndi eze Babilon mebiri ha mgbe nile, ka ha hu uzo esi eji ihe ndi a na-eme ka aru ha nwee ike, ya na ihe di egwu.
N'akwụkwọ dị na mbipụta May 1995 nke American Scientific, a na-atụle mmetụta nke ruthenium metal, ìgwè platinum banyere njikọ DNA mmadụ. A chọpụtara na mgbe a na-etinye otu ruthenium atom na njedebe ọ bụla nke DNA dị mkpirikpi, nke a ghọrọ 10000 ugboro ọzọ na-eduzi. Ọ na-aghọ onye na-akwa iko. Ruo oge ụfọdụ, ndị chemists chere na helikopi abụọ nwere ike ịmepụta, n'ọdịdị nke igwe ahụ, ụzọ dị mma, anyị nwekwara nkwenye.
N'otu aka ahụ, Review Platinum Metals na-ebipụta mgbe nile gbasara isiokwu maka iji platinum, iridium na ruthenium na-agwọ ọrịa cancer (nke kpatara nhụsianya dị iche iche nke anụ ahụ). Mgbe a gbanwere ọnọdụ nke DNA (nke bụ ikpe na ọrịa cancer), ngwa nke protein platinum ga-abanye na cell ahụ rụrụ arụ, na-eme ka ntụrụndụ nke DNA na nhazi ya. Ọgwụgwọ dị otú a anaghị agụnye ịwa ahụ ọ bụla; ya adịghị ebibi gburugburu anụ ahụ na ụzarị ọkụ na-adịghị ọgụ dịghịzi usoro, dị ka ime na ụzarị ọkụ na-anara ọgwụ.
Ndị ọkachamara ahụike bịara nwee mmasị n'ịdị elu mgbe ngalaba nchọpụta ọgwụ nke Bristol-Myers Squibb ụlọ ọrụ ọgwụ na-ekwupụta na ruthenium na-egbochi DNA, na-edozi nkwarụ nke mkpụrụ ndụ cancer. (Gold na platinum otu monoatomic metals bụ n'ezie "nri ugbo ala", Ọ dịkwa ugbu a na mkpụrụ ndụ nke ahụ na-ekwurịta okwu n'etiti onwe ha site na stealth amam site na usoro ọkụ ọkụ). Ihe sayensị ohuru chọpụtara bụ na monoatomic ruthenium na DNA, na-ekpochapụ helicoid dị mkpụmkpụ ma wughachi ya n'ụzọ ziri ezi; dịka igbatu na iwughachi ụlọ na ọnọdụ dara ogbenye.
Anyị maara nke ahụiridium na rhodium ha abụọ nwere ihe mgbochi ịka nká, ebe ruthenium na ogidi platinum na DNA na-arụkọ ọrụ na ahụ mmadụ. A makwaara na, na ha dị elu na mpaghara monoatomic, gold na platinum nwere ike ime ka usoro endocrin glandlị dị elu ruo n'ókè nke ime ka nghọta, nghọta na ikike dị iche iche pụta ìhè. Na nke a, a kwenyere na akwa ntụ ọkụ dị ncha nwere ntụpọ dị mma na mkpịsị osisi, na-amụba mmepụta nke melatonin. N'otu aka ahụ, monoatomic iridium ntụ nwere mmetụta dị otú ahụ na mmepụta serotonin nke gọọmenti pituitary, ma ga-emegharịghachi "DNA tụfuo"Tinyere akụkụ nke ụbụrụ na-ezughị okè, ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọlị.
Ọ dị mkpa karịsịa na, n'agbanyeghị niile dị oké ọnụ na ọtụtụ ugbu a nnyocha na mpaghara ebe a, akwa atụ ogho flints nzuzo a maara e nna nna anyị hà e ruo ọtụtụ puku afọ. Ha maara na ndị na-eme ihe na-ezighị ezi kwesịrị ekwesị n'ahụ mmadụ: ihe dị iche iche nke onye ọ bụla na-akpọ "ahụ nke ìhè" (ka). Ha ma na anụ ahụ nkịtị na ìhè ahụ nwere na-nri ntọt hormone mmepụta, na kacha nri nke ikpeazụ a na-akpọ Shem-ihe-na ndị Babilọn, ndị Ijipt na mfkzt manna ndị Izrel.
Ndi oru ndi okachamara nke ndi isi nchu aja (ndi n'echebe ulo nke Goolu) weputara anwansi anwansi nke ndi ulo ozo (nke bu ndi n'echebe ndi eze .......... ebe sitere na ọgwụgwọ ọrịa cancer na ụgbọ elu ụgbọelu. O nwedịrị ike inye "ihe omuma"Ọ dị mkpa ka ịga njem na mbara igwe na-enweghị ihe ịga nke ọma ruo ugbu a.
Na Nzuzo furu efu nke Igbe ahụ dị nsọ, a na-enyocha akụkọ banyere Monatomic mfkzt site na mmalite oge ruo n'oge, na-akọwa kpọmkwem mkpa nke Alliance Alliance Alliance. A na-ekwu na ọtụtụ ihe omimi a bụ obi enigmatic a, ọ dịkarịa ala n'ime ha abụghị ụdị e kere eke na Ugwu Horeb.
Akwụkwọ Exodus na-akọwa na mgbe Moses gburu nwa ehi ọlaedo nke ụmụ Israel, Chineke nyere ntụziaka ndị doro anya na-amachibido ime ihe oyiyi na-anọchi anya ihe ọ bụla dị ndụ n'ụwa ma ọ bụ n'eluigwe. Ma ngwa ngwa, o doro anya na Chineke nyere iwu ka Bezalel ahụ na-arụ ọrụ rụọ Igbe nke Ọgbụgba Ndụ ahụ, na-ekwu (n'ọhụụ zuru oke na nkwụsị nke mbụ) na cherubim ọlaọcha abụọ nwere ike imeri mkpuchi ha. Ọ bụrụ na ha abụghị ndị mmụọ ozi, dị ka a na-echekarị, gịnị bụ cherubim ndị a na-ahụ anya? Ebee ka ha nweta ikike imepụta nke a?arc na-enwu enwu nke ọnụnọ "onye mechara kpoo agha n'ọgbọ agha?
Dị ka nghọta anyị dị ugbu a banyere ihe dị elu, ọ na-egosi na Akwụkwọ Bible (yana ngwaọrụ ndị yiri ya n'Ijipt na Babilọn) metụtara kpọmkwem nyocha nke sayensi nke nkume monoatomic (shem-an-na ), mgbe ha na-enye ihe ahụ n'onwe ya nke ntinye ya, ya mere, ike elevitation na ike ịba ụba nke Igbe ahụ.
Site n'oge Mosis, otu onye nwere ike ịkọ akụkọ banyere Igbe ahụ n'ụlọ nsọ Jerusalem. N'ebe ahụ, dịka edere ya na Septuagint, Eze Solomọn ji ike ya "iji nye nri n'ụlọ eze Taịa"Ònye nyere ụgbọ mmiri, ịnyịnya na ụgbọ ala maka Royal House Judah.
Na - esote (na n'agbanyeghị ihe odide ndị megidere ya), a ga - agbaso Igbe ahụ maka afọ 2000 ọzọ ruo mgbe ọrụ dị ịtụnanya ọ rụrụ na akụkọ ihe mere eme nke Knights Templar na Europe. The ikpeazụ akụkọ ihe mere eme kwuru banyere na-abịa anyị si iri na anọ na narị afọ, na ọ ga-abụ a banyere ikpeazụ ya izu ike ebe na mgbe a ghọtara n'ihu ugbu a oge nke kwantum physics na nnyocha na superconducting Njirimara nke monoatomic ọcha na-elu-atụ ogho .
Barry Carter nke Oregon, USA kpebiri iji ndụ ya raara onwe ya nye ọmụmụ ihe Ormus na mmetụta ha. Ọ na-aga ụwa na-ekwu okwu ihu igwe na ihe ngosi na isiokwu a, na-egosi na mbara igwe nke United States ma chịkọta nyocha na akụkọ, ọbá akwụkwọ "Ormuz"Na weebụsaịtị ya
Ihe ndị a dị n'ebe niile na ihe 4 na-anọchite anya West: mmiri, ikuku, ụwa, ọkụ. A na-emesi Ormus ike pụta ìhè na afọ 1970.
Ormus dị nso na Alchemy n'ihi na o nwere ihe ndị pụrụ iche: mineral nutritive maka ahụ ike na ọgụ megide cancer, oké arụrụ ọrụ, teleportation, invisibility, mgbanwe nke ohere-oge.
Njirimara ndị a nke Ormus chetara "White Gold"Ndị ọkachamara, ndị ọkà ihe ọmụma ma ọ bụ Manna Bible ...
Enwere ụfọdụ ọla ala dị oké ọnụ ahịa, nke gụnyere ọla, Iridium, Gold, Platinum, Palladium, Copper, nwere ike ịnọpụ iche na steeti siri ike, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ọma, n'ụdị nke ntụ ntụ. ma ọ bụ na-acha ọcha na ihe ndị ọzọ-nkịtị Njirimara.
Njirimara ndị a nke Ormus maara ndị oge ochie. Anyị na-achọpụta ya n'etiti Mesopotamia, n'etiti ndị Ijipt.
Ormus dị na ọdịdị, ma ọ pụkwara imepụta usoro dị iche iche, Ormus nọ n'ala n'ime ikuku na mmiri na igwe ojii: n'ụtụtụ ụtụtụ, na vortices, na isi mmiri dị ndụ, mmiri mmiri, na nke ọma dị ka nkume granite.
Ọ bụ elixir ebe niile na mkpụrụ nke anyanwụ, n'ihi na mgbe anwụ anyanwụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mmiri na-ekpochapụ mgbe ọ na-arịgo na mmiri nke na-eme ka ọ bụrụ Ormus nke na-ebili na ígwé ojii nke orgone.-
N'otu aha ahụ, gụọ 'The ụtụtụ ọlaedo' Armand Barbault.
Enwerela Indium maka ihe karịrị afọ 80 dịka ọgwụgwọ homeopathic (nke dị n'ime ala) ma a ka amabeghị ya na uru dị oke mma dị ka ihe e ji amata ya. Na 70 afọ, Dr. Henry A. Schroeder, ama toxicologist na prọfesọ na physiology ngalaba nke akwụkwọ ahụ nke Dartmouth, mụụrụ a ọmụmụ karịa 1000 eji ụmụ mmadụ na n'ahụ mmetụta nke indium .
Nnyocha na-enye echiche na Indium na-arụ ọrụ site na ntụgharị nchịkwa azụ na hypothalamus / pituitary / adrenal (HPA). Glands ndị a na-arụ ọrụ nke 40 endocrine glands na-enyere aka ịchịkwa mmepụta nke hormones 31, gụnyere hormones ụmụ mmadụ, DHEA, Melatonin, steroid na horroone thyroid.
Ịgba ume ngwa ngwa na ike bụ otu n'ime ihe ndị na-eme egwuregwu na-akọkarị. N'otu aka ahụ, ihe ịrịba ama mbụ nke mmụba n'enyemaka n'ozuzu ha na-agbaso 5 naanị ụbọchị 10. A na-atụle mmetụta ndị ọzọ na-adịte aka, gụnyere mgbatị dị ịrịba ama na ihe ịrịba ama nke afọ.
Spanish Indigo, Latin Indium: India. A chọpụtara Indium na 1863 site na Reich etRichter n'ihi nsonaazụ nke spectroscopic nke nchịkọta nke ngwakọta nke kpugheere ha ama abụọ indigo nke a na-amabeghị.
N'ihe dị ntakịrị n'ime Earth crust (0,05ppm), indium bụ mineral 7eme kachasị dị n'etiti mineral ndị a ma ama. Indium bụ ihe na-emekarị na ahụ anyị, ọnụọgụ ya na-ebelata site na 25-35 afọ, mgbe ahụ ọ na-apụ n'anya kpamkpam.
N'ezie, dịka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ahụike Na-ahụ Maka Ahụ Ike si kwuo, nke bipụtara ọmụmụ ihe ahụ:
"N'ỤLỌGHỊ ỌZỌ NA-ECHIKE"Iji Mpịakọta 5: INDIUM. p.9 na 537, nchịkọta zuru oke nke nri sitere na nri, kwa ụbọchị na onye ọ bụla, dịka 8 micrograms (0,008mg) ka ọ na-etinye ya n'ahụ naanị ya ruo 0,2 ug, nke na-anọchite anya onyinye na-enweghị isi.
Aluminom na-agbata obi, Mba. 49 na tebụl oge dị iche iche, indium bụ ihe na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ ihe. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ugbu a ka a na-achọpụta ihe dị ka ihe e ji amata ya, e jiriwo ya mee ihe karịa afọ 80 dịka ihe ngwọta homeopathic (nke metallicum)
N'ihi na ọ dị nso na-anọghị n'ime ihe oriri, a na-ewere ogologo dị ka ihe oriri na-adịghị mma, ma nchọpụta na ọganihu ndị na-adịbeghị anya nke ọtụtụ ndị nchọpụta egosila na ihe dị n'ime ala nwere ezigbo oge na akụkọ ihe mere eme.
Indium apụghị, na ya na ala, na-kwesịrị n'ụzọ ziri ezi site na ahụ anyị. Indium na-efunahụ ngwa ngwa mgbe ejikọta ya na nri. Ọ bụ ya kpatara ya, ọ bụ ezie na a ghọtara mmiri dị ka ihe bara uru nke sitere na 1980, ọ dịbeghị onye ọ bụla meworo ka ọ bụrụ ezigbo ihe oriri.
Nnyocha nke otu ndị ọkà mmụta sayensị tinyere dr. Henri Shroeder karịrị nsogbu a site n'inweta ala, maka oge mbụ, bio-assimilable. Eleghi anya ị nụbeghị banyere dr. Shroeder, ma n'amaghị ya, anyị na-anụ ụtọ ọrụ nke ọrụ ya kwa ụbọchị ebe ọ bụ na ọ bụ onye chọrọ iwepụ isi na mmanụ ụgbọala.
Ihe oriri dị ndụ na karịsịa alkaline bụ ihe ndị na-arụ ọrụ nke arụ ọrụ nke ogo nke na-enye ohere iji nweta ma ọ bụ obere ngwa ngwa ọhụụ na-adabere n'okwu ahụ.
Mgbawanye ngwa ngwa na ume na ike bụ otu n'ime nsogbu ndị na-eme egwuregwu ma ọ bụ ndị na-eme ahụike na-akọkarị. N'otu aka ahụ, ihe ịrịba ama mbụ nke mmụba na ọdịmma zuru oke na-agbaso nanị 5 ka ụbọchị 10 gbakwunye. A na-atụle mmetụta ndị ọzọ na-adịte aka, gụnyere mgbatị dị ịrịba ama na ihe ịrịba ama nke afọ.
Indium bụ micronutrient nke ihe ya na-ejikọta usoro endocrin na hormonal n'ozuzu ya, ihe oriri kwa ụbọchị nke Indium gosipụtara uru ndị metụtara afọ n'ozuzu ha, gụnyere na ọkwa nke nchekwa, libido, iwu dị arọ na ọkwa shuga shuga. E gosiputala na mgbakwunye ya na-eme ka mmetụ nke ihe ndị ọzọ dị mkpa dị na ahụ - dị ka ọla kọpa na zinc, manganese na chromium - si otú ahụ na-enyere ha aka ịrụ ọrụ ha n'ụzọ dị irè karị. N'ime ule anụmanụ, ọnụ ọgụgụ absorption sitere na 60 gaa na 694% n'ogologo dabere na akụkụ ahụ a hụrụ.
- Nlekọta ụra mgbe 15 gasịrị
- obi ụtọ mgbe izu 1 gasịrị
- nguzo ndi ozo nke oma na njedebe nke 2 izu
- glucose dị ọcha mgbe ekwesịrị izu 3-5
- libido laghachiri mgbe izu 4 gachara
- na-achịkwa ọbara mgbali mgbe izu 10 gasịrị
- nhazi nke ime nsọ mgbe ọnwa 3 gasịrị
- na-enwe nsogbu mgbe ọnwa 4 gasịrị
N'ụzọ dị mwute, ọnụ ọgụgụ nke ọmụmụ ihe omumu nke a na-eduzi na Indium na-egosi ihe ụfọdụ, na nke ịdị n'otu n'etiti nsonaazụ ọma ha na enweghị mmeghachi omume ha na-eme na ndị ọkà mmụta sayensị. .
Ndị ọrụ afọ ofufo 1000 kachasị elu na ụmụ mmadụ na-amụ Dr. George BonadioNa laabu ọmụmụ 1300 30 ole na ole gara afọ na-egosi na Indium apụta isi glands pituitary-hypothalamus-pineal, dị ka ihe niile endocrine glands na homonụ emepụta gụnyere mmadụ ibu homonụ, DHEA, melatonin , thyroid na steroid homonụ.
Indium yiri ka ọ na-arụ ọrụ site na nzagharị nzaghachi na steeti hypothalamus / pituitary / adrenal (HPA). Glands ndị a na-arụ ọrụ nke 40 endocrine glands ma nyere aka ịhazi mmepụta nke hormones 31.
The hypothalamus bụ onye so na Central ụjọ usoro, emi odude ke ụbụrụ, ọ bụ isi ihe na homeostasis na parasympathetic ọrụ ndị dị otú dị ka ume, ahu okpomọkụ, nri oriri na mmiri dị ka nke ọma dị ka na-akpali akpali na eriri afọ na-ajụ.
Pituitary na-achịkwa mgbasa nke hormone nke na-eto eto, ogwe mmekọahụ na ọrụ nke gland.
Ogwu ndị na-eme ihe na-eme ka mkpụrụ vaịn dị ka adrenaline, epinephrine na cortisol. Họnụm ndị a na-achịkwa mmetụta nke mbufụt nakwa dị ka nghọta nke ihe mgbu, ike ọgwụgwụ na nche echiche.
Idozi usoro nzaghachi nke HPA mgbagwoju anya na-arụkọ ọrụ na mmepụta ma ọ dịkarịa ala hormones 31. Mmekọrịta a na-emepụta echiche nke ọdịmma maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Otu n'ime echiche ndị metụtara usoro ịka nká bụ na ọ na-agụnye ịbelata mmepụta nke ụfọdụ homonụ ka anyị na-etolite. Indium yiri ka ọ na-eme ihe ugbu a site n'ịhazi na imekọrịta ihe gbasara HPA, hypothalamus, pituitary na grenes. Mmiri ndị a na-arụ ọrụ na-achịkwa ụra, metabolism, okpomọkụ nke anụ ahụ, agụụ, esemokwu, ọchịchọ mmekọahụ na ọtụtụ ọrụ ndị dị mkpa nke ahụ.
The Indium akpali hormone mmepụta etoju tụnyere ndị ntorobịa, ọ na-eme na na isi na-emeputa axis homonụ na-emetụta akụkụ nile nke ịka nká na - n'ihi na ihe atụ, ndokwa nke ibu homonụ akara metabolism na-emetụta ọkpụkpụ njupụta a kpaliri. The Indium bụkwa mma na thyroid na-agakwa kwesịrị ekwesị thyroid etoju, na-akpata ihe calories ọkụ ma na-enyere na normalizing arọ.
Akara ndị ọzọ na-akọ site na iji ụbụrụ mee ihe dị ka ihe nchịkọta:
- Nwee ntachi obi ka mma.
- Ebe nchekwa dị mma
- Ogo ụra (pineal melatonin)
- Enyemaka maka migraines
- Nyere aka na normalization nke ọkwa shuga
- Normalization nke mgbali elu
- Mbelata ọrịa cancer akpa ume
- Na-ebelata mmetụta nke ime mpụ
- Kwalite ntutu isi
- Na-ebelata oge na ike nke nsị oyi
- Ka mma nwoke na nwanyi dị mma
- Ọganihu nke ọrịa prostate
The nnyocha nke Dr. Schroeder na-egosi na indium ebelata ihe ize ndụ nke etuto ahụ nke 40% na nkezi. N'ihe banyere ọrịa cancer akpa ume, indium nwere mma mgbochi carcinogenic mmetụta nile n'etiti ndi nile mara Chọpụta ọcha, The okwu na-agbasaghị mmepe nke kansa cervical sel, rectal cancer, imeju, pancreas .
Ngwurugwu na-emepụta ihe ndị na-adịghị mma na-emepụta ihe na-eme ka ọ ghara ịdị na-arịa ọrịa kansa.
N'ihe banyere ọrịa cancer na oke nká, mmiri anaghị agwọ ya kama ọ na - eme ka ndị ọrịa nwee nkasi obi ma belata ihe mgbu ha.
Nnyocha a egosiwo na mmiri dị n'ime mmiri nwere mmetụta dị arọ: ndị a na-emeso na-ebu ibu.
Ihe a na-ekwu doro anya karịa na ụmụ nwoke karịa ụmụ nwoke. Indium na-enye ohere ma ndị nwoke ma ndị nwanyị aka ịnọgide na-enwe oke anụ ahụ na-enweghị ọdịiche dị ize ndụ nke na-etinye ụfọdụ ahụ ike n'ihe ize ndụ mgbe ụfọdụ. Indium nwere mmetụta bara uru na thyroid na-akpali na normalizes ọrụ ahụ, na-ekwe ka ahụ na-erekwu kalori na normalize ya arọ. Indium na-eme ka mmadụ dịkwuo ike. N'ihi ya, ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike, ndị mmadụ na-ebukwu calorie, na-azụlite akwara kama abụba.
Indium na-eme ka o nwee ike irite uru site na ihe niile anyị na-eri nri ma na-eme ka ogologo ndụ dị oke mma. Ọ bụghị ajụjụ banyere ịkwụsị ịka nká, kama ịme ka mma ndụ nke akụkụ nke abụọ nke ịdị adị mmadụ.
Site n'inyere aka na micronutrients nke dị na mmiri nke na-esi na eriri afọ ukwu, indium na-eme ka ọtụtụ usoro ahụike nke ahụ dịkwuo mma, meziwanye ahụike na ogologo oge.
Dika ekwuru na mbu, indium yiri igosi ndu ndu na hypothalamus. Pituitary nke na-achịkwa mmepụta nke ihe ndị ọzọ hormoni 30 na-eji etiti, ogbugbu gị na-echeba otu ihe ahụ. Ndị nnyocha ahụ chọpụtara na ọganihu doro anya na nghazi hormonal mgbe a gbakwunyere ihe dị n'ime.
Indium na-ebelata ngwakọta nke lactic acid n'ihi na ọ na-enye ohere mmịpụta nke anụ ahụ.
N'ebe ndị okenye karịa afọ 40, indium na-agbazi mgbagha nke hormonal ma na-enwekwu ntachi obi (na-enweghị mmetụta ndị ọzọ) ma na-enye ohere iji hụ nsonaazụ ọma ọ bụla na arụmọrụ ọ bụla.
Ormus Nzuzo Alchemy Nke Meri Magdalene Egosiputa - Nkebi [A]: Ngwa & Akụkọ Ngwa Ndị Dị Mkpa nke sayensị
29,65€ dị na ngwaahịa
3 ọhụrụ site na 29,65 €
Ejiri 1 € 22,94 mee ihe
Zụta € 29,65
ka nke ọnwa Julaị 5, 2020 8:20
Akwụkwọ eji mee ihe na Ezi Ọnọdụ
A umu iche (Video)
Anyị niile bụ otu (Video)
Akwukwo ozigbo, oku eji eme oku “nke emere n’ime” Chad
Iza ajụjụ, pịa akara ngosi mmekọrịta nke ịchọrọ
Lee nkwupụta niile
ZỌ AKW PRODUKWỌ NA AMAZON
Pịa na akara ngosi mmekọrịta iji bipụta edemede.
Nanny sur Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta na ibu ọnụ na-eme ka ndụ dịghachi ndụ: "Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta ya ugbu a!? Islam mara nke a kemgbe narị afọ iri na anọ 😅" Jul 4, 08:49
tindee511 sur Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta na ibu ọnụ na-eme ka ndụ dịghachi ndụ: "Ọbụna ụfọdụ anụmanụ na-ebu ọnụ mgbe ha dara ọrịa" Jul 3, 18:17
tindee511 sur Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta na ibu ọnụ na-eme ka ndụ dịghachi ndụ: "A na-etinye ibu ọnụ na okpukperetọ okpukpe atọ" Jul 3, 18:14
ANYANWU ANYA N’ANYA
Pịa imechi ozi a!
Window a ga-emechi na nkeji 3
Pịa ebe a ka ịhapụ ikwu ...x